Cameron.....: မိုးဝသန်မှာ ထစ်ချုန်းခဲ့သည်…..
ညိုညက်ညက် မျက်နှာကို မိတ်ကပ်ခပ်ပါးပါးလိမ်းပြီး eye liner ထင်းထင်း မျက်တောင်ကော့ဆေး ထူထူကော့ပြီးနောက် နှုတ်ခမ်းပေါ်ကို အနီရဲရဲ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးတင်နေတုန်း သူ့ကို ဖျတ်ခနဲ သတိရမိသွားခဲ့တယ်...။ သူ့အကြိုက်ဆုံးအရာင်က အနီရဲရဲ....။ သူဆိုတာ ကျွန်မဘ၀ထဲကို ရုန့်ရင်းဆန်စွာ ချင်းနင်းဝင်ရောက်လာ ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်မက ရူးသွပ်စွဲလန်းစွာ “ကိုကို”လို့ခေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူတစ်ယောက်ပေါ့...။ မှန်ထဲက ပုံရိပ်ကို ကျွန်မ တစ်ချက်မဲ့ပြုံးပြုံးပြလိုက်မိတယ်...။ အနီရဲရဲနှုတ်ခမ်းတစ်စုံ တွန့်ကွေးသွားကြတာနဲ့တဆက်ထဲ နာကျင်မှုတွေက လည်ချောင်းတစ်လျှောက်ခါးသက်စွာ စို့နင့်သွားတယ်..။ သူနှစ်သက်စုံမက် ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ နှုတ်ခမ်းရဲရဲ တစ်စုံ...။ သူနဲ့အဝေးဆုံးကို ဝေးသွားကြပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းနီရဲရဲ ပြန်ဆိုးတဲ့နေ့ ဆိုပါတော့..။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာညစာစားပွဲကို ချီးမြှင့်ဖို့ သွားရမှာ..။ ဇာဖောက်အနီရဲရဲအရောင် မြန်မာရင်ဖုံးနဲ့ အနီရောင်ချိတ်လှိုင်းတွေပါတဲ့ အနက်ခံ ပိုးလုံချည်နဲ့။ ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ထဲကျွန်မ တစ်ပတ် လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်...။ ကျွန်မမြန်မာဆန်စွာ လှနေပြီမဟုတ်လား...။ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်အတော်များများ တက်ရောက်မယ့်ပွဲမို့လည်း ကျွန်မက ကိုယ့်အမျိုးသားဝတ်စုံကို တန်ဖိုးထားစွာဝတ်ဆင်တက်ရောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ..။ ဖိနပ်ကိုလည်း နှစ်လက်မလောက်မြင့်တဲ့ ဒေါက်တုံးနဲ့ လေဒီရူးအနီရောင်...။ ခြံထဲမှာ စိုက်ထားတဲ့ ကတ္ထီပါနီရောင် နှင်းဆီအပွင့်ကြီးကြီးတစ်ပွင့်ကို အဆင်သင့် ခူးထားခဲ့တယ်...။ ကပိုကယို နောက်တွဲဆံထုံးဘေးနား နှင်းဆီပန်းထိုးစိုက်လိုက်တော့မှပဲ အားလုံးပြည့်စုံသွားတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ခံစားလိုက်ရတယ်...။
မင်္ဂလာညစာစားပွဲလေးက သူများတွေလို ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာမဟုတ်ဘဲ... ကိုယ့်ခြံ ကိုယ့်ဝင်းထဲက မြက်ခင်းပြင်မှာ ဘူဖေးစနစ်နဲ့ဧည့်ခံတာပါ...။ သတိုးသားက အမေရိကားပြန်ဆိုတော့ သူ့ဧည့်သည်နိုင်ငံခြားသားတွေက တစ်ဝက်နီးပါးလောက်ပါတယ်...။ ဒါကြောင့် အစားအသောက်တွေက နိုင်ငံတကာအစားအသောက်အပြင် မြန်မာ့အစားအစာတွေလည်းပါတယ်...။ တစ်ယောက်တည်းနေသားကျလာတာကြာပြီမို့ ဘယ်ပွဲတက်တက် ဘယ်ခရီးကိုသွားသွား တစ်ယောက်တည်း လွတ်လပ်တယ်လို့ ခံစားမိလာတယ်...။ အဖော်တွေဘာတွေပါရင် အားနာနေရဦးမယ် မဟုတ်လား..။ သတိုးသမီးက ကျွန်မရဲ့ ကျောင်းတုန်းကသူငယ်ချင်း ပြန်တွေ့ကြတာမကြာသေးဘူး...။ ကျွန်မကို သတိုးသမီးက မြက်ခင်းပြင်စားပွဲဝိုင်းတွေထဲက အရှေ့ဆုံး အစွန်ဒေါင့်ဝိုင်းမှာနေရာချပေးပါတယ်..။ အခင်းအကျင်းလေးက ရိုးစင်းတယ် နိုင်ငံတကာဆန်တယ် စတိတ်စင်နောက်ခံကိုတော့ အဖြူရောင်နှင်းဆီပန်းတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတယ်...။
“ကိုယ့်အတွက်တော့ သိပ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ညပဲ thanks god...”
ကျွန်မနောက်ကျောဆီ ကြားဖူးနေကျအသံတစ်ခုကြောင့် ကြက်သီးမွှေးတွေထသွားခဲ့ရတယ်...။ ကျွန်မလှည့်ကြည့်ပြီး နှုတ်က ယောင်ရမ်းပြီး “ကိုကို”လို့ ခပ်တိုးတိုးထွက်သွားခဲ့သေးသလား...။
“ကြည့်စမ်း အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနဲ့မင်းကလှတုန်း ဆွဲဆောင်မှုရှိတုန်းပါလား”
သူက ပြောရင်း ခုံတစ်လုံးဆွဲပြီး ကျွန်မရှေ့တည့်တည့်မှာထိုင်လိုက်တယ်...။ သူ့အပြုအမူတွေက အရင်တိုင်းပဲ...။ တဖက်သားကို အားနာမှုမရှိ အမြဲတစေရဲတင်းနေတော့တာပဲ...။
“မင်းက နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ကိုယ့်ရဲ့ညကို သည်းသည်းမဲမဲရွာချလိုက်မယ့်မိုးပဲ..”တဲ့...
ကျွန်မကတော့ ကျွန်မရဲ့ညကို မိုးကြိုးတွေ ထစ်ချုန်းခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲ မှတ်တယ်...။ ခုချိန်ထိ ကျွန်မသူ့ကို စကားတစ်ခွန်းမှ မတုန့်ပြန်ရသေးဘူး...။ သူ့ကို ကျွန်မ စိုက်ပဲကြည့်နေမိခဲ့တယ်...။ ဟင့်အင်း ကျွန်မ ရှင်နဲ့ ထပ်မဆုံချင်ပါဘူး...။ ဘာကြောင့် ကျွန်မရှေ့ကို တည့်တည့်မတ်မတ်ပြန်ရောက်လာခဲ့တာလဲ...။
“မင်း မျက်ဝန်းတွေက ကိုယ့်ကိုနာကျည်းမုန်းတီးရိပ်တွေ စွန်းထင်နေတုန်းပါလား..” ကျွန်မ သူ့အကြည့်တွေဆီက လွှဲပစ်လိုက်တယ်..။ အိတ်ထဲက ဖုန်းထုတ်ပြီး တစ်ခုခုကိုကြည့်နေလိုက်တယ်...။
“နေဦး ၀သန်... ခုနက ကိုယ့်ကိုလှည့်ကြည့်တုန်းက မင်း ကိုယ့်ကို “ကိုကို”လို့ခေါ်လိုက်သလားပဲ...”
သူ ကျွန်မကို ကြိုးစားပြီး စကားဆက်နေချိန်မှာပဲ ပိန်ပါးပါး မိန်းကလေးတစ်ယောက် သူ့ကို အတင်းလာဆွဲခေါ်သွားတာကြောင့် ကျွန်မ သက်ပြင်းချလိုက်ရတော့တယ်...။ သူ့ရဲ့ နံပတ်စဉ်ဘယ်လောက်မှန်းမသိတဲ့ အဲဒီမိန်းကလေးကို ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်...။ ကျွန်မ ခပ်စောစောပြန်မှဖြစ်မယ်...။ ဘူဖေးမှာကျွေးတဲ့ အစားတွေကို နည်းနည်းပါးပါးထည့်စား သစ်သီးဖျော်ရည်လေးသောက်ပြီး ကျွန်မ သတိုးသမီးကို ပြန်ဖို့ နှုတ်ဆက်တော့..။
“ မိုးရေ... နင်နဲ့ ထစ်ချုန်းနဲ့ သိကြတယ်ဆို အေးဆေးမှပြန်ပါလား..သူက မောင့်သူငယ်ချင်း Califonia မှာကတည်းက ခင်ကြတာ... ငါတို့ မင်္ဂလာပြန်ဆောင်လို့ လိုက်လာခဲ့တာ”
“ကိုယ် ခေါင်းကိုက်နေလို့ စောစောပြန်ချင်ပြီ...” လို့ အကြောင်းပြနှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်ခဲ့လိုက်တယ်...။
သူ့ကို ဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးလည်းဆိုတာ သတင်းတွေမျိုးစုံ နားနဲ့ကြားခဲ့တာတောင်မှ ကျွန်မ သူ့ကို အပြစ်မမြင်ခဲ့ဘူး…။ တော်တော်မိုက်မဲတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပဲ….။ ဟုတ်တယ် သူကိုယ်တိုင်ကတောင် အံ့အားသင့်လောက်အောင် မိုးဝသန်ဆိုတဲ့ ကျွန်မကို ထူးဆန်းတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဆိုပြီး ငေးမောကြောင်ကြည့်နေခဲ့ဖူးတယ်…။ ကျွန်မအတွက်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး… ထစ်ချုန်းဆိုတာ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် လူတွေကို အထူးသဖြင့် မိန်းမတွေကို ထစ်ချုန်းပြီး ရွာချပစ်လိုက်မယ့် မိုး…. အက်ဆစ်မိုးလေ…။ ကျွန်မနဲ့ထစ်ချုန်းက မိုးချင်းတူပေမယ့် ကျွန်မကတော့ လူတိုင်းကိုအေးမြအောင်ရွာချပေးတဲ့ ၀သန်မိုး… သူ့လို အက်ဆစ်မိုးမျိုး မဟုတ်ဘူး…။
တကယ်တော့ ကျွန်မနဲ့သူ ဆုံခဲ့တာက မှားဝင်လာခဲ့တဲ့ ဖုန်းတစ်ခုကနေတဆင့်ပါ……..။ သူက ကျွန်မဆီစရောက်လာတာတောင် ထစ်ချုန်းမိုးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ရောက်လာခဲ့တာ……။
“ဒီမှာ ဇော်… မင်း ကိုယ့်ဆီက ဒီလိုထွက်ပြေးတိုင်းလွတ်မယ်လို့ထင်လား…. အေး မင်း တံခါးသော့ခတ်ပြီး ပြေးလည်းပြေးပေါ့ ကမ္ဘာဆုံးပြေးနိုင်ပြေးဦးပေါ့… တစ်နေ့ကျ မင်းကိုယ့်ဆီပြန်လာမှ ကိုယ့်အဆိုးမဆိုနဲ့နော်… ကိုယ်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ မင်းကောင်းကောင်း သိပါတယ်….. မင်းအကြောင်းတွေကို ကိုယ်ဖွပစ်လို့ရတယ်နော်… ကဲ ဘာလို့ ငြိမ်နေလဲ ပြန်ပြောဦးလေ ဒီတစ်ခါတော့ မင်းဖုန်းမချပစ်ဘူးပဲ… ဘာတွေကြံစည်နေလို့လဲ ပြောစမ်းပါဦး”
မိန်းမတစ်ယောက်ကို နိုင့်ထက်စီးနင်းဆန်စွာပြောဆိုနေတဲ့ တစ်ဖက်ကယောက်ျားသားကို ကျွန်မ မမြင်ရဘဲ မသိဘဲနဲ့ တော်တော်လေး မုန်းတီးနာကျည်းသွားခဲ့မိတယ်…။ မိခင်လောင်း… အမေမျိုးဖြစ်တဲ့ မိန်းမတွေကို လေးစားမြတ်နိုး တန်ဖိုးမထားတဲ့ယောက်ျားတွေလောက် မုန်းစရာ စက်ဆုတ်ရွံရှာစရာကောင်းတာမရှိဘူး….။ ကျွန်မက နဂိုကတည်းကမှယောကျာ်းတွေကို အထင်မကြီးတတ်တဲ့သူ…။ ဖုန်းမှားဝင်လာတော့လည်း တည့်တည့်ပဲ…။
“ရှင်…ဖုန်းမှားဆက်နေပြီ… ကိုယ့်နံပါတ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ဦး…. ဇွတ်ပြောနေတော့တာပဲ…..”
ကျွန်မအသံကြားတော့ သူခေတ္တငြိမ်သွားပြီး ဘာပြန်ပြောရမယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားနေပုံရတယ်…….။
“နေပါဦး ခင်ဗျားကရော ဖုန်းမှားတာသိသိနဲ့ ဘာမှမပြောဘဲ ဘာလို့နားထောင်နေလဲ…”
“ရှင်က တရစပ် ရေပက်မ၀င်ပြောနေတာလေ… ဖုန်းလည်းမှားတယ် ဆောရီးလေး ဘာလေးပြောမယ် မကြံဘူး ရန်စွာလိုက်သေး ဘယ်လိုယောက်ျားပါလိမ့်…ဒါပဲ…” ဆိုပြီး ကျွန်မ ဖုန်းကိုချပစ်လိုက်တယ်….။
“ဟေ့… ခင်ဗျားက ခင်ဗျားပြောချင်တာပြောပြီး ဖုန်းချပစ်လိုက်တာ ဘာသဘောလဲ…”
“ဘာပဲပြောပြော ခင်ဗျားဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့ ကျွန်တော်အလွတ်ရသွားပြီ… နောက်နေ့ထပ်မဆက်ဘူးလို့ အာမ မခံဘူးနော်….”
“အရူး… ရှင့်နံပါတ်ကို ဘလော့ပစ်မှာ ဆက်မလာနဲ့ … အထင်ကြီးချင်စရာတစ်စက်မှကိုမရှိတဲ့ ယောက်ျားတွေ …”
ကျွန်မဖုန်းချပစ်ပြီး သူ့ဖုန်းကို ဘလက်လစ်ထဲချက်ချင်းထည့်ပစ်လိုက်တယ်…။ ဒီလိုလူကပြောလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး … အရှက်လည်းရှိမယ့်ပုံမပေါ်ဘူး…။
ကျွန်မသူနဲ့လူချင်းဆုံမိတော့ ပုံစံတစ်မျိုး…။ ကျွန်မနဲ့ဖုန်းမှားဝင်ပြီး ပြောသွားတဲ့သူလို့တောင်မထင်ရက်ပါဘူး…။ ကွန်ပျူတာပြင်ဆိုင်တစ်ခုမှာ Update လုပ်ထားတဲ့ ကျွန်မ laptop ကိုသွားရွေးတဲ့ညနေကပေါ့….။ ကျွန်မရောက်တော့ ထိုင်ခုံမှာထိုင်စောင့်နေတုန်း IT ကောင်လေးတွေနဲ့ စကားအချေအတင်ပြောနေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်…။ ကြည့်ရတာ သူ့ laptop က ၀ယ်ထားတာသိပ်မကြာသေးပဲ Error ဖြစ်သွားတာ..။ အားလုံးပြင်ဆင်ပြီး ပြန်ကောင်းသွားပြီ IT ကောင်လေးတွေက ၀ယ်တာသိပ်မကြာသေးပဲဖြစ်သွားလို့ အားနာပြီးသူ့ကို Warranty ကာလတစ်နှစ်ကနေ နောက်ထပ်ခြောက်လထပ်တိုးပေးတာကို သူကလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေတာ…။
“ကျွန်တော် အဲဒီလိုတိုးပေးတာကို သဘောမကျဘူးဗျ ခုက ကျွန်တော့်စက်ကို တခြားတစ်ယောက်ပြန်ရောင်းပစ်မှာ တော်ကြာ အဲချာတိတ်ကလေးတွေက ပေးထားတဲ့ Warranty က ပုံမှန်ထက်ပိုရနေရင် ကျွန်တော့်စက်ကို သံသယဖြစ်သွားမှာ မတိုးပေးနဲ့ရတယ် ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါ…”
ဆိုင်က သူ့ကို အလကားခြောက်လတောင်တိုးပေးမှာကို သူကအကြံကြီးစွာနဲ့ မယူလိုက်ပုံကိုနားထောင်ရင်း ကျွန်မသဘောကျသွားမိလို့ နားထောင်နေရင်းက ပြုံးလိုက်မိသွားတယ်…။ ကျွန်မပြုံးစစဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ သူလှည့်အကြည့်မှာဆုံဖြစ်သွားခဲ့တယ်…။ သူကလည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ သူ့ကိုပြုံးပြတယ်ထင်ပြီး ပြန်ပြုံးပြတယ်…။ ကျွန်မချက်ချင်းမျက်နှာတည်ပြီးလွဲပစ်လိုက်တယ်…။ သူက ချက်ချင်းပဲ ကောင်တာရှေ့ကနေ ကျွန်မဆီကို တန်းလျှောက်လာခဲ့တယ်…။
“ခုနက ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြတာ ကျွန်တော်နဲ့သိလို့လား… ကျွန်တော်တို့အရင်က မဆုံဖူးဘူးထင်တာပဲ…” တဲ့ အဲလိုချက်ချင်းကြီးကို ၀င်ရောတတ်တာ သူ့အရည်အချင်းတစ်ရပ်ပေါ့…။
“ရှင့်ကို မပြုံးပြပါဘူး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သဘောကျစရာတွေ့လို့ပြုံးတာ…”
“မဖြစ်နိုင်တာ ဒီအခန်းထဲမှာ ခင်ဗျားရယ် ကျွန်တော်ရယ် စောစောက ၀န်ထမ်းနှစ်ယောက်ရယ်ပဲရှိတာ… သဘောကျစရာရှိလဲ ဒီလူတွေထဲကတစ်ယောက်ယောက်ပေါ့ ပြီးတော့ ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်ကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး ပြုံးတာပါ…” ကြည့်လေ… မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောနေတာကိုတောင် သူက ရအောင်အထွန့်တက်ပြောတတ်သေးတာ…။
“မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကို ရှင်က ဘာကိစ္စအသည်းအသန်မယုံနိုင်ဖြစ်နေတာလဲ ရှင့်ကိုလည်း ကျွန်မသိဘူး…”
“အိုခေ… အိုခေ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ့မယ်… ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အခုမိတ်ဆွေဖွဲ့လို့ရသားပဲလေနော်… ကျွန်တော့်နာမည် ထစ်ချုန်း…. ဖလော်ဆော်ဖီနောက်ဆုံးနှစ် တက်နေပါတယ်…ဒီက နာမည်ကကော”
ဘလိုင်းကြီးလာရောနေတဲ့ သူ့ကို ကျွန်မမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပစ်လိုက်တယ်…။ အဲချိန်မှာ ၀န်ထမ်းမိန်းကလေးက ကျွန်မရဲ့လက်တော့ကိုလာပေးလို့ သူကျွန်မကို ဆက်ပြောမယ့်စကားကို ခနရပ်ထားပြီး သူလည်း ကောင်တာက သူ့လက်တော့ကိုသွားယူနေတယ်…။ ကျွန်မသူပစ္စည်းသိမ်းနေတုန်း စကားကြော ထပ်လာရှည်နေမှာစိုးလို့ မြန်မြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်…။ ကားဂိတ်က လမ်းထိပ်မှာမို့ ခပ်သုတ်သုတ်လေးလျှောက်လိုက်တယ်…။ ဗြုန်းဆို မိုးကရွာချလိုက်တာ သေပါတော့ ကျွန်မထီးမပါလာခဲ့ဘူး…။ laptop လေးတော့ မိုးစိုလို့မဖြစ်ဘူး… ကျွန်မ သရေလက်ပွေ့အိပ်လေးထဲကို သေချာထည့်ပြီး ပိုက်ထားလိုက်ပြီး လမ်းထိပ်နားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးထဲ မိုးဝင်ခိုဖို့ အပြေးတပိုင်းနဲ့လှမ်းလိုက်တယ်…။
ကျွန်မနောက်က ကားဟွန်းသံကြောင့်လမ်းဘေးကပ်လိုက်တယ်…။ မိုးရွာနေပါတယ်ဆိုမှ လမ်းဖယ်ပေးတာတောင် ခပ်သွက်သွက်မသွားတဲ့ကားကို နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်…။
“ဘယ်ပြန်မလဲ ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ လမ်းကြုံသည်ဖြစ်စေ မကြုံသည်ဖြစ်စေပေါ့ ခုမှ ဆိုင်ကရလာတဲ့ စက် မိုးစိုလို့မဖြစ်ဘူးလေ… ” တဲ့…။ အို ကျွန်မက ဘာအကြောင်းနဲ့ကျွန်မမသိတဲ့သူနဲ့ ကားလိုက်စီးရမှာတုန်း…။ ဒီလူငယ်ကလေးက မိန်းမတွေကို အားနွဲ့သိမ်ငယ်တတ်တဲ့ လူတန်းစားထဲကို ထည့်ထားပုံရတယ်…။
ကျွန်မသူပြောတာကို နားမထောင်တော့ဘဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲပြေးဝင်ပြီး စားပွဲတစ်ခုမှာထိုင်လိုက်တယ်…။ အိပ်ထဲက ပါလာတဲ့ စက္ကူလက်ကိုင်ပုဝါနဲ့ ဆံပင်တွေကို နဲနဲသုတ်လိုက်တယ်….။ စားပွဲထိုးလေးကို လက်ဖက်ရည်ပုံမှန်တစ်ခွက်မှာလိုက်တယ်…။
“ညီရေ… ကိုယ့်အတွက်လဲ ပုံမှန်တစ်ခွက်ကွာ…”
ဆံပင်သုတ်နေရင်းနဲ့ ကျွန်မရှေ့ကအသံရှင်ကြောင့်မော့ကြည့်လိုက်တော့ သူဖြစ်နေတယ်။
“ကျွန်တော် ခင်ဗျားနဲ့တစ်ဝိုင်းထဲထိုင်မယ်နော်…”တဲ့ ပြောရင်း လူက ထိုင်ချပြီးသားဖြစ်နေပြီ…။
“ရော့ ဒီပုဝါလေးနဲ့ သုတ်လိုက်ပါ ခင်ဗျားဆံပင် တစ်ရှူးစတွေ ကပ်ကုန်ပြီ…”
သူက အဖြူဆွတ်ဆွတ်မွှေးပွပုဝါတစ်ထည်လှမ်းပေးတယ်…။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မမငြင်းတော့ဘဲ လှမ်းယူလိုက်တယ်…။ ကျွန်မဒီလိုမိုးစိုလို့ မသုတ်ရင် နောက်နေ့အအေးမိ နှာစေး ချက်ချင်းဖြစ်တတ်တာ မနက်ဖြန်ကလည်း အလုပ်ကအရေးကြီးတယ် ခွင့်ယူလို့မဖြစ်တာမို့ သူ့ပုဝါနဲ့ သုတ်လိုက်တယ်..။
“ရပါတယ်… ယူထားလိုက် ပြန်လျှော်ပေးတော့လဲ ခင်ဗျားနဲ့ထပ်ဆုံဖြစ်တာပေါ့ နောက်တစ်ခါ… ဟက်ဟက် ပျော်စရာကြီး..” သူက ကျွန်မနဲ့ထပ်ဆုံဖို့ကို ပျော်စရာကြီးလို့ပြောနေတာ ထူးဆန်းနေတယ်…။
“ခင်ဗျားတော့မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျားနဲ့ထပ်ဆုံချင်လို့လေ…” စကားပြောပွင့်လင်းတဲ့ သူ့ကို ကျွန်မတစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်…။ မျက်ခုံးထူထူနက်နက်နဲ့ မျက်တောင်ရှည်ရှည်တွေဝန်းရံထားတဲ့ အလျားရှည်ရှည်မျက်အိမ်တွေက တခါတခါပြုံးလိုက်ရင် မှေးစင်းသွားကြတယ်…။ ဆံပင်တွေက ခုခေတ်လူငယ်လေးတွေထားတတ်တဲ့ နဖူးပေါ်အပြည့်ဝဲနေတဲ့အပြင် လည်ကုတ်ထောက်လောက်ရှည်တဲ့ ခပ်ထူထူကြမ်းကြမ်းဆံပင်မျိုး..။
ပြီးတော့ လာချပေးတဲ့ လက်ဖက်ရည်ခွက်ထဲက ကျွန်မခွက်ကို သူကယူပြီးဇွန်းနဲ့သေချာမွှေပေးနေတယ်…..။ အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကျွန်မဘ၀မှာ ကျွန်မကို ဘယ်ယောက်ျားသားတစ်ယောက်ကမှ ခုလိုမလုပ်ပေးခဲ့ဖူးဘူး..။
“ရှယ်မဟုတ်ပေမယ့် သူတို့က နို့ဆီကို သေချာမွှေမထားတတ်ဘူးလေ …” လို့ လက်ဖက်ရည်ခွက်ကို မွှေပေးရင်းပြောပြီး ကျွန်မရှေ့ကို ခွက်လေးချပေးလိုက်တယ်…။ စောစောက မိုးရေတွေနဲ့အေးနေတဲ့ ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်လေး နွေးခနဲဖြစ်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်…..။ ဒါ ကျွန်မကို သူ ဒုတိယအကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာလိုက်တဲ့ မိုးပေါ့…။
ကျွန်မက သူ့နဲ့စကားမပြောဘဲ သူပြောတာကိုပဲနားထောင်ပြီး တိတ်တဆိတ်သူ့ကို အကဲခတ်နေလိုက်တယ်…။
“ခင်ဗျားဘယ်ပြန်မှာလဲ ကားပါလား ဒါမှမဟုတ် တက်စီငှားပြန်မှာလား… ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပါရစေ… မိုးလဲချုပ်နေပြီ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ထဲ…”
“ရပါတယ် တစ်ယောက်တည်းက ပိုပြီး အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်….”
“ဟင်…ခင်ဗျားပြောပုံကလည်း ကျွန်တော်ကပဲ အန္တရာယ်ကောင်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့”
“နိုး နိုး နေပါဦး ခင်ဗျားစကားတွေက ၀ါဒသိပ်ဆန်တာပဲ…ဘာလဲ ခင်ဗျားက အဲလိုယောကျာ်းတွေကို အားလုံးသိမ်းကျုံးပြောပုံထောက်တော့ Feminism လားခင်ဗျားက…. ဒါမှမဟုတ် လိင်တူချင်းပဲကြိုက်တဲ့ Les လား…”
ကျွန်မ စိတ်တော်တော်တိုပြီး စားပွဲကို တစ်ချက်လက်ဝါးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်…။ အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံတစ်ထောင်တန်ကိုပစ်ချထားပြီးနေရာကထထွက်သွားလိုက်တယ်…။ လမ်းထိပ်မှာ ကျွန်မစီးမယ့် ဘတ်စ်ကလည်းအဆင်သင့်ရောက်နေလို့ ကားပေါ်တစ်ခါတည်းတက်လိုက်တယ်…။ ဒင်း ဒါမှ မျက်ခြေပျက်သွားမှာ…။ ဘယ်လိုလူလဲမသိ မိန်းမတစ်ယောက်ကို အဲလောက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ရသလား..။ ကျွန်မနေတဲ့မြို့နယ်ကို မှတ်တိုင် ဆယ်ခုလောက်တော့ စီးရမှာဒါပေမယ့် ဒီချိန်က ကားချောင်တာမို့ သိပ်မမောင်းရတော့ပါဘူး… အလွန်ဆုံး မိနစ်နှစ်ဆယ်ပေါ့…။
မီးပွိုင့်လွတ်နေတာနဲ့ကြုံလို့ ဆယ့်ငါးမိနစ်နဲ့ ကျွန်မ ဆင်းရမယ့် မှတ်တိုင်ကို ရောက်သွားခဲ့တယ်…။ မိုးက တဖွဲဖွဲရွာနေတုန်း …။ အိမ်ကို လမ်းလျှောက်ပြန်ရဦးမှာ…။ ဆိုက်ကားငှားစီးရမလား လမ်းပဲခပ်မြန်မြန်လျှောက်ပြန်ရမလား ကျွန်မမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်…။ ဆိုက်ကားဂိတ်နားရောက်တော့ ဆိုက်ကားတွေက တစ်စီးမှမတွေ့ရ မထူးဘူး လမ်းလျှောက်ပြန်ရမှာပဲလေ…။ လမ်းကနဲနဲမှောင်တော့ သတိထားပြီးလျှောက်ရသေးတယ်…။
“တီ တီ တီ….”
တီးပြန်ပြီ ဒီကားဟွန်း အလွတ်ကြီးကို ကျွန်မက ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ လျှောက်နေတာ ကိုယ့်လမ်းကိုသွားတာကို ဘာတွေလာပြီး ဟွန်းတီးနေမှန်းမသိဘူး…။ လူကစိတ်သိပ်ကြည်တာမဟုတ်ဘူး…။
“ဒီမှာ ခင်ဗျားကို အိမ်ပြန်ပို့ပေးမယ် ကားပေါ်တက်ပါ ဘာလို့ မလိုအပ်ဘဲ ခေါင်းမာနေတာလဲ… မိုးချုပ်ကြီးမိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်း ပြီးတော့ မိုးကလဲရွာနေတာ… ကျွန်တော်အာမခံတယ် ခင်ဗျားကို လက်ဖျားနဲ့တောင်မတို့ပါဘူး စိတ်ချပါ…”
သူက ကျွန်မလျှောက်နေတဲ့ ပလက်ဖောင်းနားကပ်ပြီး ဘီးလှိမ့်မောင်းရင်း ပါးစပ်က တတွတ်တွတ်ရွတ်နေတယ်..။
“နေဦး ကျွန်မကိုခေါင်းမာတယ်ပြောရအောင် ရှင်ကရောကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘဲ ကျွန်မနောက်ကို ဘာလို့စပ်စပ်စုစု လိုက်လာတာလဲ …. မလိုဘူး ကျွန်မအိမ်ကအရှေ့လမ်းကျရင် ရောက်ပြီ…”
“ခင်ဗျားနောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ဘယ်သူပြောလဲ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်တာပဲလေ…”
ကျွန်မ သူနဲ့ခံငြင်းမနေတော့ဘဲ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဆက်လျှောက်လာလိုက်တယ် သူကလည်း ကားကိုခပ်ဖြေးဖြေးလှိမ့်ရင် ကျွန်မနောက်ကိုလိုက်မောင်းနေတုန်းပဲ..။ ကျွန်မက လမ်းမအတိုင်းမသွားတော့ဘဲ ပြန်နေကျလမ်းကြားလေးထဲကို ချိုးဝင်လိုက်တယ် လမ်းချိုးလေးက တစ်လမ်းမောင်း ကားမ၀င်ရဆိုတဲ့ အမှတ်အသားဆိုင်းဘုတ်လေးပြထားတော့ သူ့ကားလေး လမ်းထိပ်မှာ တန့်ပြီးကျန်ရစ်ခဲ့တယ်...။ ကျွန်မ လက်ပွေ့အိတ်ကို ခပ်တင်းတင်းပွေ့ထားရင်း သူ့ကိုလှည့်မကြည့်ဘဲ တစ်ချက်ပြုံးလိုက်မိတယ်...။ လမ်းကြားလေးဆုံးတော့ ကျွန်မတို့တိုက်ရှေ့ကိုတန်းမြင်ရတဲ့ လမ်းမကြီးကိုပြန်ပေါက်သွားတယ်...။
ဘုရားရေ ... သူက လမ်းချိုးထဲလိုက်မ၀င်လာနိုင်လို့ ကျွန်မကို ဒီလမ်းထိပ်ဖက်မှာ ပြန်လာစောင့်နေတယ်..။
“ကိုယ်မှန်းတာမှန်သားပဲ မင်းဒီလမ်းကနေပြန်ထွက်လာမယ်ဆိုတာ...မင်း အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ ကိုယ်စိတ်ချပါပြီ Good Night နော်..”တဲ့...။
ကျွန်မသူ့ကိုလှည့်မကြည့်ဘဲ လမ်းကူးပြီး တိုက်လှေခါးထဲကိုဝင်သွားလိုက်တော့တယ်...။
အဲဒီနေ့က ကျွန်မသူ့ကို အဖြေပေးတဲ့နေ့။ မှတ်မှတ်ရရ မီးရောင်မှိန်မှိန်ထွန်းလင်းထားတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်သေးသေးလေး တစ်ခုထဲမှာပါ..။ “၀သန့် နှုတ်ခမ်းလေးတွေက ဖူးဖူးပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ သိပ်လှတာပဲလို့” သူပြောပြီး ကျွန်မနှုတ်ခမ်းကို လက်ညိုးလေးနဲ့တို့ထိကြည့်တယ်...။ သူ့မျက်နှာက ကျွန်မနဲ့ နီးကပ်လွန်းအားကြီးလို့ စီးကရက်နံ့တချို့နဲ့ သူ့အသက်ရှူငွေ့ ပူနွေးနွေးတွေတောင် ကျွန်မ နဖူးကိုလာဟတ်နေတယ်..။ ရီဝေတိမ်းညွှတ်မှုတွေကြားမှာ ကျွန်မရင်ခုန်သံတွေ ဆူညံနေခဲ့တယ်..။ မထင်မှတ်ဘဲ ရုတ်တရက် ကျွန်မနှုတ်ခမ်းအစုံကို သူငုံပြီးနမ်းလိုက်တော့ ပထမ ကျွန်မလန့်ဖျတ်ပြီး ကြယ်သီးတတ်မထားတဲ့ သူ့ ဂျက်ကက်အကျီတွေကို စောင့်ဆွဲမိလျက်သား.... ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သူ့ဆီက ရုန်းထွက်မရခဲ့ဘူး..။ ကျွန်မကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး “ဒါ ၀သန့်ရဲ့ ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံလား” တဲ့...။ ကျွန်မ သူ့ကိုမျက်လွှာချပြီး ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်....။ “သိပ်ချစ်တာပဲ ၀သန်ရယ်...”လို့ သူဆွဲဆွဲငင်ငင် ညည်းတွားရင်း ကျွန်မကို သူ့ရင်ခွင်ထဲ နစ်ဝင်မတတ် ပွေ့ဖက်ထားခဲ့တယ်..။ အဲဒီနောက် ကျွန်မဟာ သူနဲ့စတွေ့တုန်းက သူ့အကျင့်စရိုက်တွေကို မေ့လျော့မိန်းမောပြီး သူ့ညွှတ်ကွင်းအောက်မှာ တိမ်းမူးပျော်ဝင်သွားခဲ့တယ်....။
သူက နောက်အိမ်ထောင်ပြုထားတဲ့ အမေ့အိမ်မှာသိပ်မနေဘဲ သူ့ အဖေ၀ယ်ပေးထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကွန်ဒိုခန်းမှာ အနေများခဲ့တယ်..။ အဲဒီအခန်းလေးဟာ ကျွန်မတို့အသစ်စက်စက် ချစ်သူနှစ်ယောက်အတွက် နိဗ္ဗာန်ဘုံဖြစ်ခဲ့တယ်....။ တကယ်တော့ ကျွန်မ မတိုင်ခင် သူ့အရင်ရည်စားဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Maryဇော် နဲ့သူ အချစ်စခန်းဖွင့်ခဲ့ဖူးတဲ့နေရာဆိုတာ...ကျွန်မ သိလိုက်ရချိန်မှာတော့ အရာရာဟာ သိပ်ကို နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ...။ ကျွန်မ သူနဲ့ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူး ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်တာနဲ့ စကားများကြရတော့တယ်..။ “မင်းက သိပ်နားညည်းတာပဲ ဒီခေတ်မှာ ဒီလိုနေထိုင်ကြတာ အစမ်းတကြယ်မှမဟုတ်တော့တာ မင်းက ဘယ်ခေတ်ကလာတာလည်း” တို့ဘာတို့ ကျွန်မကို သူက ရာဇ၀င်ထဲက ရောက်လာတဲ့ လူသားတစ်ယောက်လို့ တအံ့တသြနဲ့ပြောသေးတယ်..။
ကျွန်မသာ သူ့လက်ကိုင်ပုဝါပြန်ပေးဖို့ သူ့ကိုကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုမှာမချိန်းဖြစ်ခဲ့ရင်.... သူနဲ့ကျွန်မချစ်သူဖြစ်ဖို့ လမ်းစ စခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး...။ တကယ်ဆို ကျွန်မ အဲဒီလက်ကိုင်ပုဝါကို ဖျောက်ပစ်ခဲ့ရမှာ...။ ခုတော့ နောင်တလည်းမရချင်တော့ပါဘူး...။ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ ပထမဆုံးသောမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်...။ သူ့ရဲ့ မာယာညွှတ်ကွင်းထဲ ဆင်းသက်ခဲ့လိုက်မိတဲ့ အမှားတွေ...။ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ ခွင့်လွှတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး..။ သူ့အကျင့်စရိုက်ကိုသိသိလျှက်နဲ့ ကျွန်မသူနဲ့ချစ်သူဖြစ်သွားခဲ့တယ်...။ ကျွန်မစည်းရုံးရင် သူနည်းနည်းလေးများ ပြုပင်သွားမလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်သဲ့သဲ့လေးကလည်း အထင်နဲ့လက်တွေ့မှာ တက်တက်စင်အောင်လွဲတာပဲ...။ နဂိုဗီဇအမူအကျင့်တွေကို ပြောင်းလဲဖို့ဘယ်တော့မှ ကြိုးစားမှာ မဟုတ်တဲ့သူလို့ ကျွန်မသူနဲ့အနီးကပ်နေတော့မှ ပိုသိလာခဲ့ရတယ်..။ ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုမှညှိယူမရနိုင်တော့တဲ့ အဆုံးမှာ သူနဲ့ကျွန်မချစ်သူသက်တမ်း ငါးလကျော်မှာပဲ လမ်းခွဲလိုက်ကြတော့တယ်...။
“၀သန်ဘာလို့ ကိုယ့်ကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာလဲ မင်းပင်ပန်းရုံပဲအဖတ်တင်မယ် ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်နေမြဲအတိုင်း အမြဲရှိနေမှာပဲ... မင်းသဘောမကျရင် ကြိုက်သလိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်... မင်းလည်းကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်ခဲ့တာမှမဟုတ်ဘဲ... ကိုယ်တို့လမ်းခွဲသွားလည်း တစ်ပတ်လောက်ပဲပေါ့ အလွန်ဆုံးခံစားရရင် မင်းကိုယ့်ကို ခဏလေးနဲ့မေ့ပစ်နိုင်မှာပါ ကိုယ်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်...”
တကယ်တော့ လမ်းခွဲဖို့ကို သူကစခဲ့တာပါ။ ဟုတ်တယ် ကျွန်မစမပြောခင် ညနေခင်းတစ်ခုမှာ ကျွန်မတို့အတူ ကော်ဖီသောက်ရင်း သူပြောခဲ့တာ..။ သူကကော်ဖီမကြိုက်သူ ကော်ဖီကြိုက်တတ်တဲ့ ကျွန်မကို စီးကရက်တစ်လိပ်ဖွာရင်း စောင့်ကြည့်နေတတ်သူ...။ ကျွန်မက စီးကရက်မကြိုက်ပေမယ့် သူစီးကရက်ရှိုက်ဖွာပုံကို တရှိုက်မက်မက်နှစ်မျှောနေတတ်တဲ့သူ...။ သူလမ်းခွဲစကားပြောတော့ ကျွန်မမျက်ဝန်းတစ်စုံမှာ အရည်လဲ့သွားခဲ့တာကို သူမြင်ဖြစ်အောင်မြင်လိုက်သေးတယ်...။
“ကိုကိုနဲ့ ဘယ်တော့မှပြန်မဆုံပါရစေနဲ့....”လို့ ကျွန်မအသံတွေ တုန်ယင်စွာထွက်ပေါ်လာတော့ သူက မသိသလို တစ်ဘက်လှည့်ပြီး စီးကရက်သာဖွာနေခဲ့တယ်..။ နောက်ဆုံးအကြိမ်ထိ ကျွန်မ မိုက်မဲစွာသူ့ကို ကိုကိုလို့ခေါ်လိုက်မိသေးတယ်...။ ကျွန်မသူနဲ့အတူထိုင်တဲ့ ကော်ဖီစားပွဲကနေ ပိုက်ဆံအိတ်ကောက်ကိုင်ပြီး ထပြန်ခဲ့တယ်..။ အဲဒါ ကျွန်မတို့နောက်ဆုံးဆုံတွေ့ခြင်းပဲ....။
“ဒေါက်..ဒေါက်.. ” တံခါးခေါက်သံနဲ့အတူ
ကျွန်မထိုင်တဲ့ ရုံးခန်းကို သူဘယ်လိုသိသွားခဲ့ပါလိမ့်...။ နက်ပြာရောင် suit အပြည့်အစုံနဲ့ သူက အရင်လိုမဟုတ်ဘဲ သပ်ရပ်ကြည့်ကောင်းနေတယ်..။ ဆံပင်တိုကပ်ကပ်ညှပ်ထားပြီး ဗာဒံစေ့မျက်အိမ်ရှည်ရှည်ထဲက မျက်ဝန်းနက်နက်တွေကတော့ အရင်လိုစူးရှဆဲ...။ သူ့အကြည့်တွေက ကျွန်မရဲ့ နီညိုရောင်ဆိုးထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ...။
ကျွန်မ ခပ်ပြတ်ပြတ်မေးတော့ ကျွန်မခွင့်မပြုသေးဘဲ ကျွန်မစားပွဲရှေ့တည့်တည့်က ထိုင်ခုံကို သူဆွဲထုတ်ရင်း တခဏတန့်သွားတယ်...။
“ကိုယ်တို့က ကိစ္စရှိမှ တွေ့ရမယ့်သူတွေလား ..”
“ အသေချာဆုံးကတော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိတော့ဘူးလေ...”
သူက ကျွန်မနှုတ်ခမ်းကိုပဲ ခပ်စိုက်စိုက်ကြည့်ရင်းက ကျွတ်ခနဲတချက်မြည်တမ်းလိုက်သေးတယ်..။
“ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စအတွက်လာတာပါ...နောက်နှစ်ကျရင်..ကိုယ် မြန်မာပြည်ကို အပြီးပြန်လာတော့မှာ..အဲဒါ ဒယ်ဒီတို့ အလှကုန်လုပ်ငန်းမှာ ဦးစီးလုပ်ဖို့ Marketingတို့ ကြော်ငြာရိုက်မယ့်ကိစ္စတို့အတွက် မင်းဆီက ကိုယ် အကူညီလိုတယ် ၀သန်”
“အမျိုးသမီး မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ရဲ့ အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မဆီက မဂ္ဂဇင်းမှာ ကြော်ငြာထည့်ဖို့ ကိစ္စကလွဲလို့ ကျန်တာ ဘာမှ ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး..”
“အဲဒါပဲလေ... ကိုယ်က ကိုယ်တို့ ကုမ္ပဏီကထုတ်မယ့် နှုတ်ခမ်းနီအတွက် မင်းကို မော်ဒယ်လ်လုပ်ပေးဖို့ လာကမ်းလှမ်းတာ..”
သူ့ကမ်းလှမ်းစကားကိုကြားတော့ ကျွန်မသိပ်မအံ့သြမိပါဘူး...။ ကျွန်မတို့ ချစ်သူဘ၀တုန်းက သူခနခနတောင်းဆိုဖူးနေတာ ကျွန်မမှတ်မိပါတယ်..။ အဲဒီနေ့က အနီရောင်နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးတင်ထားတဲ့ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းကို သူလက်ညှိုးနဲ့တို့ပြီး “၀သန်က နှုတ်ခမ်းနီရဲနဲ့သိပ်လိုက်တာပဲ တစ်ရက်လောက် အနီရောင်ဝတ်စုံလေးဝတ်လာခဲ့ပါလား မင်းသိပ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိမှာသေချာတယ်..”
“ဆောရီး...ကျွန်မ လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး...” ကျွန်မချက်ချင်းပဲ လူခေါ်ဘဲလ်နှိပ်ပြီး ခနကြာတော့ ကျွန်မလက်ထောက် လဲ့ရည်မွန်ဝင်လာတယ်..။
“မွန်ရေ... ဧည့်သည်ကို ပြန်ပို့လိုက်ပါဦး”
ယဉ်ကျေးစွာအနှင်ခံလိုက်ရလို့ သူတော်တော်လေး ဒေါသထွက်သွားမယ်ထင်ပေမယ့် သူက ကျွန်မက နှုတ်ခမ်းကိုသာ စိုက်ကြည့်ပြီး တစ်ချက်ပြုံးပြီးထွက်သွားပါတယ်..။ သူ နောက်ဆုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်မသိပေမယ့် လောလောဆယ် ကျွန်မရှေ့မှာ သူ့ရဲ့ နိုင်ထက်စီးနင်းဆန်လွန်တဲ့ အပြုံးကို မမြင်ချင်တော့လို့ပါ..။
အဟောင်းရောင် ရွှေအိုနဲ့အနက်စပ်ကြားသုတ်ထားတဲ့ သံဘာဂျာတံခါးနောက်က မီးခိုးမှိုင်းစိမ်းရောင် စပ်သုတ်ထားတဲ့ တံခါးတစ်ချပ်ရှေ့ကို ကျွန်မရပ်လိုက်မိတယ်...။ (တချိန်တုန်းက ကျွန်မသူ့ကို လမ်းခွဲစကားပြောပြီး သူနဲ့ တစ်ပတ်နီးပါးလောက် မတွေ့ဘဲနေလိုက်ပြီး သူ့ဆီက ဖုန်းအဆက်အသွယ်ပြန်ရတော့ ဒီအခန်းရှေ့မှာပဲ သူ့ကို ကျွန်မ အကြောင်းမဲ့ ဖက်ပြီးငိုခဲ့ရသေးတယ်...) ရုံးကအပြန် ဒီအခန်းရှေ့ကို လာဖို့ ဘာက ကျွန်မဆန္ဒကို တိုက်တွန်းလိုက်သလဲ ကျွန်မသေချာ မဝေခွဲနိုင်ခဲ့ဘူး..။ သော့တံလေးနဲ့ သော့ခလောက်ကို ကျွန်မဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ထူးဆန်းတာက သုံးနှစ်ကျော်ကြာမှ တစ်ခါ ဒီနေရာကိုခြေချမိပေမယ့် သံတံခါးလက်ကိုင်မှာ ဖုန်မှုန့်တွေ ရှိမနေတာကိုပဲ...။ သစ်သားတံခါးချပ်ကို ကျွန်မတွန်းဝင်သွားလိုက်ချိန်မှာ သစ်တောအုပ်ထဲကိုရောက်သွားသလိုပဲ ခံစားလိုက်မိတာက သစ်ခေါက်စိမ်းနံ့ သစ်တောနံ့တွေ ထုံလွှမ်းလို့...။ တစ်ချိန်က ကျွန်မသိပ်နှစ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရနံ့လေးက သုံးနှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ မွှေးပျံ့တုန်းတဲ့ မယုံနိုင်စရာပဲ...။ တကယ်ဆို ဒီလောက်နှစ်တွေကြာ လူမနေတဲ့အခန်းမှာ ဖုံနံ့တွေပဲရှိနေသင့်တာမဟုတ်လား..။ ပြီးတော့ သူသောက်နေကျ စီးကရက်နံ့တချို့ပါရနေတယ်..။ တစ်ယောက်ယောက်များ အခန်းလာရှင်းထားတာလားလို့ သံသယ၀င်မိပေမယ့် အဲဒီတစ်ယောက်ယောက်ဟာ သူကလွဲလို့ဘယ်သူမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ...။ ဒီလောက်နှစ်ကြာအောင် ပစ်ထားခဲ့တဲ့အခန်းကို သူစိတ်ဝင်တစားလာရှင်းထားတာလည်း မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူး..။ ရုတ်တရက် ကျွန်မအကြည့်တွေ ဧည့်ခန်းဆိုဖာထိုင်ခုံဘေး side table အသေးလေးပေါ်က စိမ်းပြာလဲ့ကြည်နေတဲ့ ဖန်အိုးလုံးလေးပေါ်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်..။ လက်စသတ်တော့ တစ်ခန်းလုံးမွှေးရနံ့တွေ သင်းပျံ့နေတာ ဒီရေမွှေးအိုးဆီကလာတာကိုး...။
အ၀ါရောင်ချည်သားဆိုဖါထိုင်ခုံတွေ တီဗီနဲ့ စာအုပ်စင်တွေကတော့ အရင်တိုင်းပဲ..။ အနောက်ဖက်ကို ကျွန်မဆက်လျှောက်သွားလိုက်တယ်...။ မှန်အနှောက် Slide door လေးတပ်ဆင်ထားတဲ့ အိပ်ခန်းကလေး...။ တံခါးလေးကို ဘေးတွန်းဖွင့်လိုက်တော့ အထဲမှာ အ၀ါရောင်မီးလေး ခပ်မှိန်မှိန်လင်းနေတယ်..။ အိစက်နေတဲ့ မွေ့ယာခပ်ထူထူပေါ်မှာ အဖြူဆွတ်ဆွတ်ပျော့အိအိစောင်တစ်ထည် အုပ်ထားတယ်..။ အဖြူရောင်ခေါင်းအုံးအကြီးနှစ်လုံး အသေးနှစ်လုံး..။ အခန်းထဲမှာတော့ သစ်တော်သီးရနံ့လေး ခပ်သင်းသင်းရလိုက်တယ်..။ ကုတင်ခြေရင်းက အဖြူရောင်မွှေးနုကောဇောပေါ် ကျွန်မခြေစုံရပ်ရင်း စောင်အိအိလေးကို လက်နဲ့တစ်ချက် ပွတ်သပ်ကြည့်တယ်...။ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြန်မြင်ယောင်မိလို့ ကျွန်မ ချက်ချင်း မျက်စိစုံမှိတ်ပစ်လိုက်ပြီး အာရုံလွဲလိုက်တယ်..။ ပြီးတော့ ကျွန်မ အာရုံတွေ နောက်ဖေး မီးဖိုချောင်ဆီရောက်သွားခဲ့တယ်..။ မီးဖိုထဲရော ဘာတွေများအပြောင်းလဲဖြစ်နေလဲလို့ သိချင်စိတ်တွေ ယိုဖိတ်မိပြန်တယ်..။ မီးဖိုအ၀င်ဝ နံရံက ကော်ဖီဖျော်တဲ့ စားပွဲရှည်လေးက ဒီတိုင်းပဲ ကော်ဖီစက်တွေလည်း ဒီတိုင်းပါပဲ..။ မီဖိုပေါ်မှာ ဆူခါနီးရေနွှေးအိုးကိုမြင်တော့ ကျွန်မဆတ်ခနဲတုန်လှုပ်သွားခဲ့ရတယ်..။ ဒီအခန်းထဲမှာ သူရှိနေတာသေချာသွားပြီလေ..။ တခဏတွင်းမှာပဲ အနောက်ကနေကျွန်မကို ရေစိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ တင်းကျပ်စွာပွေ့ဖက်ထားတာကိုခံလိုက်ရတယ်..။ ပြီးတော့ ကျွန်မ လည်ဂုတ်ပေါ် အိစက်နွေးထွေးတဲ့ အတွေ့တခုကို လိုက်ရတယ်....။
“ကိုယ်မင်းကို သိပ်လွမ်းတာပဲ ၀သန်ရယ်.....” ကျွန်မနားနား ကြားရုံလောက်လေး ခပ်တိုးတိုး ညည်းတွားလိုက်တဲ့ သူ့အသံက ကျွန်မနှလုံးခုန်သံကို ပိုမိုခြောက်ခြားစေခဲ့တယ်..။ ကျွန်မ ကြောက်ရွံ့စွာပဲ သူ့ခြေဖမိုးပေါ် ကျွန်မခြေဖနောက်နဲ့ စောင့်နင်းပြီး တံတောင်နဲ့ သူ့နံကြားကိုထိုးလိုက်တယ်..။ ကျွန်မရဲ့ အမှတ်မထင်လှုပ်ရှားလိုက်မှုကြောင့် သူနာကျင်စွာနောက်ပြန်ကျသွားခဲ့တယ်..။
“အား....ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်... ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ ၀သန် ... မင်းတော်တော်ရက်စက်တာပဲ..”
ကျွန်မလှည့်ကြည့်တော့ သူက နံနှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပိုက်ထားရင်း ပုံရက်သားလေးဖင်ထိုင်ကျလို့..။ ကျွန်မကို သူက ရံှု့မဲ့မဲ့မျက်နှာနဲ့မော့ကြည့်ပြီးနောက် တစ်ချက် သဘောကျစွာရယ်လိုက်တယ်..။ ဖြူဖွေးညီညာတဲ့ သွားတွေပေါ်အောင် သူရယ်ပြုံးလိုက်တော့ ကျွန်မ တခဏငေးမောသွားရတယ်..။ ကျွန်မတို့ ရည်စားဖြစ်စက သူ့သွားတန်းလေးတွေ ဖြူဖွေးသန့်ကြည်နေတာကို ကျွန်မသဘောကျတော့ သူက စိတ်ရှည်လက်ရှည် သူ့သွားတိုက်နည်းကို ရှင်းပြခဲ့သေးတယ်..“ကိုယ်က သွားပွတ်တံပေါ်သွားတိုက်ဆေးကို အပြည့်ထည့်ပြီး သုံးမိနစ်လောက်အကြာ ခံတွင်းတစ်ခုလုံးနှံ့အောင်သေချာတိုက်တာ အဲဒါ ဟိုး ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မာမီ ထရိန်းထားပေးတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေပေါ့” တဲ့..။
ရေချိုးပြီးခါစ အပေါ်ဝတ်ဗလာနဲ့ ဘောက်ဆာဘောင်းဘီတိုဝတ်ထားတဲ့သူက ခုတော့ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်လေး တစ်ယောက်လို..။ သူလက်ကမ်းပေးတဲ့လက်ကို ကျွန်မယောင်ရမ်းပြီး ကိုင်လိုက်တော့.. ကျွန်မလက်ကို အားပြုပြီး သူမတ်တပ်ထရပ်လိုက်တယ်..။ ပြီးတော့ သူကိုယ်တိုက်ထားတဲ့ Pear ဆပ်ပြာနံ့လေး ကျွန်မခန္ဓ္ဓာကိုယ်မှာ ထုံသင်းရစ်သိုင်းကျန်နေတုန်း..။ ရေစက်တွေနဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားဖုတွေ ဆီကနေ အကြည့်လွှဲပြီး ကျွန်မ ရေနွေးအိုးဆူနေတာကို မီးပိတ်လိုက်တယ်..။
“ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ့်ကို ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖျော်ပေးပါလား..၀သန် ပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် မင်းလက်ရာ ကြက်ဥထမင်းကြော်လေး တစ်ပွဲလောက်လဲ စားချင်တယ် အိုခေ.. ကိုယ်အ၀တ်သွားလဲပြီး ပြန်လာခဲ့မယ်..”
ကျွန်မကတော့ သူစေခိုင်းရာကို လိုက်လုပ်နေတဲ့ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်ပမာ ထားနေကျ ကောဖီခွက်ကို ဗီဒိုထဲကထုတ်ဆေးပြီး ကော်ဖီစားပွဲပေါ်က သူအသစ်ယူလာဟန်တူတဲ့ ဒီမှာ မရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားဖြစ် 3in1 ကော်ဖီထုပ်လေးကို ဖောက်ပြီး ဖျော်ပေးလိုက်တယ်..။ ထမင်းပေါင်းအိုးထဲက ထမင်းတပန်းကန်ခူးပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲက ကြက်ဥတစ်လုံးနဲ့ ကျွန်မသူ့ကို ခါတိုင်းကြော်နေကျ ကြက်ဥထမင်းကြော်မကြော်ဘဲ ပဲငံပြာရည်အနောက်နဲ့ ထမင်းကို ငရုတ်ကောင်းလေးနဲ့ ကြော်ပြီး ကြက်ဥကြော်လေးအုပ်ပေးလိုက်တယ်..။ ကော်ဖီခွက်တစ်ခွက်နဲ့ထမင်းကြော်ပန်းကန်နဲ့ ကျွန်မသူ့ကို ထမင်းစားစားပွဲမှာ ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ်..။
သူထွက်လာတော့ အသားရောင်ချည်သားဘောင်းဘီရှည်ပွပွနဲ့ အဖြူဆွတ်ဆွတ်ချည်သားရှပ်လေးကို ရင်ဘတ်က ကြယ်သီးသုံးလုံးလောက်ဖြုတ်ပြီး ကပိုကရိုဝတ်ထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်..။ သူအရင်လို ပေါ့ပေါ့တန်တန် ဖြစ်သလိုနေထိုင် စားသောက်တဲ့ သူမဟုတ်တော့မှန်း သိသာလာတယ်..။ အိမ်ထောင်ကျိုး မိသားစုက ဆင်းသက်လာတဲ့ သူဟာ အရင်ကဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂျစ်ဆီတစ်ယောက်လိုနေနေတာ....။ သူ့ဒယ်ဒီရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားကို လိုက်သွားကတည်းက သူနေထိုင်ဝတ်စားပုံတွေ နည်းနည်းပြောင်းလာခဲ့တယ်..။
“ဟား...မွှေးနေတာပဲ ဗိုက်တော်တော်ဆာသွားပြီ ကိုယ်စားတော့မယ်နော် ၀သန်ရောမစားဘူးလား ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖျော်သောက်လေကွာ..”
ကျွန်မဆီက တုန့်ပြန်မှုတောင်မယူတော့ဘဲ သူ ထမင်းကြော်ကို အာသာငမ်းငမ်းစားနေတော့တယ်..။ ပြီးတော့ ကော်ဖီကိုတကျိုက်သောက်လိုက်သေးတယ်..။
“နေ့လည်စာအတွက် ကျေးဇူးပဲ.... ကိုယ်တကယ်လုံးဝထင်မထားဘူး တကယ်တကယ် ၀သန့်လက်ရာကို ခုလို စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ စားရလိမ့်မယ်လို့လေ..ပြီးတော့ မင်းက ကိုယ့်ကို နာကျည်းရွံမုန်းနေတဲ့ သူတစ်ယောက်မဟုတ်လား ဒါကြောင့် ဒီလိုအခွင့်အရေးက ဘုရားပေးပဲ မင်းဆီကဘယ်တော့မှ ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလို့တောင် ကိုယ်မှတ်ယူထားခဲ့တာ..”
“မင်းနဲ့ကိုယ်က အချိန်တိုကလေးပဲဆုံလိုက်ရပေမယ့် မင်းအပေါ် ဆိုးခဲ့မိုက်ခဲ့ အနိုင်ယူခဲ့တာတွေအတွက်ကို ကိုယ်တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်..... အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင် ကိုယ်မင်းနဲ့ စပြီးလမ်းခွဲလိုက်ကတည်းက ဒီနေ့ထိ မင်းကိုတစ်နေ့မှမေ့မရခဲ့ဘူးဆိုတာ မင်းယုံကြည်ပေးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ..”
ကျွန်မ သူပြောတာတွေကို သေချာသူ့မျက်လုံးတွေကို စိုက်ကြည့်နေခဲ့မိတယ်..။ ရီဝေမှိုင်းညှို့နေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေကို ကျွန်မတစ်ခါမှမမြင်ဖူးခဲ့ဘူး..။ သူတကယ်လိမ္မာနေပြီလား..။ ကျွန်မ သူ့ဆီမှာ ဒုတိယအကြိမ် ရှုံးနှိမ့်သူမဖြစ်ချင်ဘူး လုံးဝမဖြစ်ချင်တော့ဘူး..။ ကျွန်မ ကျွန်မ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ..။ ပြီးတော့ ကျွန်မ ဘာလို့ ဒီအခန်းလေးဆီကို တည့်တည့်မတ်မတ်ရောက်လာခဲ့သလဲ..။ ခုချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်မိတာကလွဲလို့ ဘာမှမတတ်နိုင်တော့..။
“ခဏလေး မင်းဘာမှမစားဘူးဆိုရင် ကိုယ်ပန်းသီးခွဲပေးမယ်..” သူက စားပြီးသားပန်းကန်တွေကို ဘေစင်ထဲထည့်လိုက်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲက အနီရဲရဲ ပန်းသီးတစ်လုံးကိုအခွံခွာပေးနေတယ်..။ ကြွေပန်းကန်ပြားလေးထဲ ပန်းသီးစိပ်ထည့်ပြီး သူကျွန်မရှေ့ချပေးပါတယ်..။ ဘုရားရေ... ကျွန်မတစ်သက်မှာ သူကိုယ်တိုင်ခွဲကျွေးတဲ့ ပန်းသီးကို ပထမဆုံးအကြိမ်စားဖူးခြင်းပဲ..။
“ကျေးဇူး..” သူ့ပန်းသီးတစ်စိပ်ကို ခရင်းနဲ့ထိုးစားရင် ကျွန်မသူ့ကိုမော့မကြည့်ဘဲ ကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်တာ..။
“ဒါနဲ့ မင်းဒီကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောက်လာတာလဲ ကိုယ့် Cosmetic အတွက် ကြော်ငြာလက်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့လား... လာ ၀သန် ကိုယ်တို့ ဧည့်ခန်းမှာ အေးဆေးစကားပြောရအောင် ပြီးရင် မင်းကို ကိုယ်လက်ဆောင်ပေးစရာရှိတယ်..”
ကျွန်မလက်ဖျားလေးကိုတစ်ဖက်ဆွဲပြီး တစ်ဖက်က ပန်းသီးပန်းကန်လေးကိုကိုင်လို့ ဧည့်ခန်းဖက် ထွက်လာလိုက်ကြတယ်..။ ကျွန်မလေ သူဆွဲခေါ်ရာနောက်ကို တကောက်ကောက် လိုက်နေမိတယ်...။ အညှို့ခံထားရသလို ကျွန်မ ခုချိန်ထိ သူ့ကို ဘာမှ ရေရေရာရာ ခွန်းတုံ့ မပြန်နိုင်သေးဘူး..။ သူ့ရဲ့ ဆွဲငင်နိုင်စွမ်းအားတွေက ခုထိရှင်သန်ထက်မြတ်နေတုန်း...။
ကျွန်မ ဆိုဖါပေါ်ထိုင်ချလိုက်တော့ သူက ရီမုတစ်ခုနဲ့ သီချင်းဖွင့်လိုက်တယ်.....။ အေးစက်ပြီး သစ်နံ့သင်းပျံ့နေတဲ့ အခန်းထဲမှာ ထွက်ကျလာတဲ့ ဂီတသံစဉ်တစ်ခုက Lana Del Rey ရဲ့ Blue Jean...။ ပြီးတော့ သူက အနက်ရောင် စက္ကူအိတ်လေးတစ်လုံး ကျွန်မကိုကမ်းပေးတယ်..။
ကျွန်မစက္ကူအိတ်လေးထဲက ဗူးလေးတွေထုတ်ကြည့်လိုက်တယ် ..။ ဖန်လုံးပုလင်းလေးတွေပါတဲ့ စက္ကူဗူးလေး သုံးဗူးထွက်လာတယ်..။ အပြာရောင် ပန်းရောင်နဲ့ ခရမ်းဖျော့ရောင်သုံးဗူး..။ ဗူးလေးမှာရေးထားတာက “Essential Moe... My Lover Sense ရဲ့ Blue, Pink, Purple ” တဲ့
“အဲဒီရေမွှေး သုံးခုလုံးရဲ့ ရနံ့က ၀သန်နှစ်သက်တတ်တဲ့ ရနံ့လေးတွေကို အနီးစပ်ဆုံးထုတ်ထားတာ.. .ရေမွှေးနာမည်ကတော့ ၀သန်ဟာ ကိုယ့်အတွက် မရှိမဖြစ်မိုးလို့ဆိုလိုတာပဲ My Lover Sense ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့်ချစ်သူရဲ့ သင်းရနံ့ပေါ့.. အရောင်တွေက Blue, Pink နဲ့ Purple သုံးမျိုးထုတ်ထားတယ်..။ Blue က ခပ်သင်းသင်းအေးအေး ကြည်ကြည်လင်လင်လေး... Pink ကတော့နူးညံ့သိမ်မွေ့မိန်းကလေးဆန်တဲ့ရနံ့.. Purple ကတော့ အရှင်းဆုံးပြောရရင် သိပ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Sexy သိပ်ဖြစ်တဲ့ ရနံ့လေးပဲ... ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးရနံ့ဆိုပါတော့.. ကိုယ်အဲဒီရေမွှေးကို ခဏခဏ ရှူမကြည့်ရဲဘူး... ဘာလို့လဲ သိလား” လို့ သူက ဆက်မပြောသေးဘဲ ခဏရပ်လိုက်ပြီး ခရမ်းရောင်ရေမွှေးပုလင်းလေးကိုယူပြီး အနံ့စမ်းတဲ့ စက္ကူချောင်းလေးကိုတစ်ချက်ဖျန်းလိုက်တယ်..မွှေးရနံ့လေးက လေထဲမှာ..ထုံအီမူးရစ်စွာပျံ့နှံ့သွားတယ်...။
“ဒီရေမွှေးနံ့လေးရတိုင်း မင်းကို သတိရလွမ်းဆွတ်တဲ့ စိတ်တွေကို ကိုယ်ဘယ်လိုမှမမြိုသိပ်နိုင်လို့ပဲ” လို့သူစကားဆက်တယ်... ။
“ဒီရေမွှေးသုံးခုရဲ့ ရနံ့တွေ အားလုံးက “၀သန်မိုး”ဆိုတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကနေ အခြေခံပြီး ဆင်းသက်လာကြတာဆို မမှားဘူး.. ကိုယ်ဘ၀မှ ပထမဆုံးကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ရေမွှေးလေး ကိုယ်ဒါကို Limited Edition ပဲထုတ်မှာ...”
ကျွန်မသူရှင်းပြတဲ့ သူ့ရေမွှေးတွေအကြောင်း သူ့ကိုစိုက်ကြည့်ရင်း နားထောင်နေခဲ့တယ်..။ ကျွန်မလုံးဝထင်မထားခဲ့ဘူး သူဟာ ကျွန်မအပေါ်ဒီလိုလေးလေးနက်နက်သဘောထားလိမ့်မယ်လို့လေ...။ သူဒီလို အလုပ်တစ်ခုကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်တတ်သွားလို့လည်း သူ့အဖေကို ကျွန်မက ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်..။ နိုင်ငံခြားမှာ အလှကုန်ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကို ဦးစီးနေတဲ့သူ့အဖေဆီသူရောက်သွားခဲ့တာ သူ့ဘ၀လမ်းမှန်ပေါ်ကို ရောက်သွားခဲ့တာပဲ..။ အို ..ဒီလိုပြောပြရုံနဲ့ ကျွန်မသူ့ဆီပျော်ဝင်သွားရမှာလား သူ့အလုပ်ကို သက်သေနဲ့တကွ ကျွန်မစောင့်ကြည့်ချင်သေးတယ်..။
“၀သန် ကိုယ့်ကို လေ့လာပါ သုံးသပ်ပါ ကိုယ့်ကို ချက်ချင်းမယုံကြည်ပါနဲ့ရပါတယ် ပြီးရင် ကိုယ်ပြောထားတဲ့ ကြော်ငြာကိစ္စလေးကို အလေးနက်ထားပြီး စဉ်းစားပေးပါ...” ကျွန်မရဲ့ ရင်းတွင်းသံသယကို သူရိပ်မိသွားပုံထောက်တယ်..။
ကျွန်မ သူနဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိလောက်အောင် ဆိတ်သုန်းနေခဲ့တယ်..။ ကျွန်မအိမ်ပြန်သင့်ပြီ..။ သူနားမှာ ကျွန်မ အချိန်ဘယ်လောက်ထိ အသက်ရှူရပ်နေခဲ့သလဲ ခုကျမှ သက်ပြင်းမောအရှည်ကြီးကို တိတ်တခိုးချလိုက်ရင်း သူ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်..။
“ကျွန်မပြန်တော့မယ်..... ရှင်ပြောတာတွေကို ကျွန်မစဉ်းစားပါ့မယ်...”
“အိုခေ... ဒီနေ့အတွက် ၀သန့်ကို ကိုယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်...နောက်လည်း ကိုယ်နဲ့ ကော်ဖီအတူလာသောက်နိုင်ပါတယ်လို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..”
သူ့ရဲ့ အနြေ္နရမှု တည်ငြိမ်အေးဆေးမှုကို ကျွန်မအသိမှတ်ပြုပါတယ်လို့ ၀န်ခံပါတယ်...။ သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ကျော်လောက်က ဆိုးသွမ်းရူးသွပ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်မ အမြင်နဲ့ယုံကြည်လိုက်ချင်ပေမယ့် သူ့စကားလုံးတွေမှာ မာယာတွေပျော်ဝင်နေတယ်လို့ ကျွန်မခံစားရနေတယ်..။ ကျွန်မသူ့ကို ဆက်ပြီးလေ့လာပါဦးမယ် စောင့်ကြည့်ပါဦးမယ်..။ သူဗီဇဆိုးတွေ ထပ်မပေါ်လာပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရင်းပေါ့..။
သူ့ဝဋ်ကြွေးပဲပါလာလို့လား ကျွန်မသူ့ဆီက မလွတ်မြောက်နိုင်သေးတာလား... သူ့ကမ်းလှမ်းမှုကို ကျွန်မ ဒီနေ့ပဲလက်ခံလိုက်တယ်....။ ကျွန်မငြင်းရင် ရလျက်နဲ့ တစ်စုံတစ်ရာက ကျွန်မကို တွန်းအားပေးနေသလို..။ နောက်လကစလို့ ကျွန်မကိုယ်တိုင် အယ်ဒီတာလုပ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးမှာ ကျွန်မကိုယ်တိုင် နှုတ်ခမ်းနီကြော်ငြာအတွက် မျက်နှာဖုံးရှင်...။ သူကတော့ သူအသစ်စမယ့် လုပ်ငန်းအတွက် ကျွန်မရဲ့ ပါဝင်မှုကို အားရကျေနပ်နေလေရဲ့...။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ဆို ကျွန်မ သူ့ဆီက ရုန်းထွက်ဖို့ ခက်ခဲသွားပြီ..။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုက တဖြေးဖြေးစိပ်စိပ်လာဖို့ပဲရှိတော့မှာ...။ တခါတခါကျ ကျွန်မ သူနဲ့ပြန်လည်ပတ်သက်ရမှာကိုတွေးပြီး စိတ်မောနေမိတယ်..။ တခါတခါကျ သူ့မျက်ဝန်းတွေအောက်မှာ ကျွန်မ အရေပျော်သွားတော့မတတ်...။ ကျွန်မ အဝေးဆုံးကို ထွက်လည်းပြေးချင်တယ်... ပြေးလည်းမပြေးချင်ဘူး ...။ ကျွန်မ သူ့ကို သံယောဇဉ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ မငြင်းပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ တစ်ခုခုကို ကြောက်နေမိတယ်....။
“၀သန် တစ်ယောက်ထဲ ဘာတွေ တွေးနေတာလဲ နေမကောင်းဘူးလား...”
သူက နေမကောင်းဘူးလားလို့ နှုတ်ကလည်းပြောရင် လက်က ကျွန်မနဖူးပြင်ကို စမ်းပြီးသားဖြစ်နေပြီ...။ ကျွန်မထိုင်ခိုင်နောက်ကျောဆီက သူ့ထွက်သက်ငွေ့ငွေ့က ကျွန်မလည်တိုင်မှာနွေးခနဲ..။
“နည်းနည်းနွေးတေးတေးနဲ့နော် အဖျားတိုင်းကြည့်မလား ဟင်... မင်းဖျားလို့တော့မဖြစ်ဘူး ဒီနေ့မှ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် ဟန်နီးမွန်းခရီးအစပဲရှိသေးတာ ခုမှ ခရီးရောက်မဆိုက်ကို... လေယာဉ်စီးရလို့ နည်းနည်းပန်းသွားတာဖြစ်မယ် အိပ်ယာပေါ်ခဏလှဲနေလိုက် ကိုယ် ကော်ဖီပူပူတစ်ခွက်ဖျော်ပေးမယ် ..”
သူက ပြောလဲပြောရင်း လက်တစ်ဖက်က ကျွန်မကျောပြင်အောက် တစ်ဖက်က တခေါက်ခွက်အောက်လျှိုပြီး ကျွန်မကို ခုတင်ပေါ်ပွေ့တင်လိုက်ပြီးသား..။ ကျွန်မ မေးစေ့ကို သူက နှုတ်ခမ်းနဲ့ဖိကပ်နမ်းလိုက်ရင်း “ ကိုယ့် မိန်းမက ကိုယ့်ကိုများလန့်ဖျားဖျားနေသလား..” တဲ့..။ “မင်း တော်တော်နွမ်းနေပုံပေါက်တယ် ၀သန်.. ခဏအိပ်လိုက်မလား ကော်ဖီသောက်ထားနော် ကိုယ်ရေချိုးလိုက်ဦးမယ်...” ကျွန်မ အသာခေါင်းညိတ်ပြရင်း မျက်စိစုံမှေးအိပ်လိုက်တယ်...။ လူနေမကောင်းတာထက် ကျွန်မစိတ်တွေ လေးကန်နေတယ် ဘာကိုမှန်းမသိ စိတ်ကမှိုင်းဝေထုံထိုင်းနေတယ်...။ အခု ကျွန်မက ကျွန်မပျော်ရွှင်ရမယ့်လမ်းကို ရွေးချယ်လိုက်တာမဟုတ်လား ကျွန်မ ဘာကို တွေးကြောက်ပြီးတွေဝေနေသလဲ...။ တွေးရင်း ခေါင်းတွေတအားကိုက်လာလို့ မှေးရင်း ကျွန်မ အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်..။ ပြန်နိုးလာတော့ ကျွန်မဘေးမှာ သူက ကျွန်မကို ထိုင်ကြည့်နေလျက်သားလေး...။
“အိပ်ရေးဝရဲ့လား.....၀သန့်ကိုကြည့်ရတာ ကိုယ့်ကိုတခုခုကြောက်နေသလိုပဲ...ကိုယ့်ကို ၀သန်ချစ်လို့ လက်ထပ်ခဲ့တာမဟုတ်လား.... ဟုတ်သားပဲ မင်း ခုချိန်ထိ ကိုယ်ကို ချစ်တယ်လို့ တခါမှမပြောသေးဘူးနော်..” ကျွန်မခေါင်းအုံးဘေး သူတစောင်းလှဲချလိုက်ရင်းပြောလိုက်တယ်..။
ခေါင်းအုံးပေါ်လက်ထောက်နေတဲ့ သူ့ကို ကျွန်မအသာမော့ကြည့်လိုက်တယ်...။ သူ့မျက်ဝန်းတွေ ကြည်လင်သန့်စင်နေတာပဲ.....တခါတခါ ကြယ်ပွင့်တွေလို တောက်ပလင်းလက်သွားကြတယ်..။ ကျွန်မမြင်ဖူးနေကျ ရုန်းရင်းဆန်တဲ့အရိပ်တွေ ဘာဆိုဘာမှမတွေ့ရဘူး...။ ကျွန်မဆံပင်တွေကို သူကပွတ်သပ်ရင်း “ပြောပါဦး ကိုယ်ကို ၀သန်တကယ်ချစ်လို့ လက်ထပ်ခဲ့တာမဟုတ်လား...ကိုယ်ကတော့ မင်းကိုအချစ်ဆုံးပဲ...”တဲ့။
“ကိုကိုပြောချင်တာ ထားဖူးခဲ့သမျှ ရည်းစားတွေထဲမှာ အချစ်ဆုံး အဲဒီလိုမဟုတ်လား” လို့ ကျွန်မစိတ်ထဲကပဲ မေးလိုက်မိတယ်..။ ဘာလို့မှန်းမသိ ကျွန်မ ပါးပြင်ပေါ်မျက်ရည်တွေ နွေးခနဲစီးကျလာတော့ သူ့ရင်ခွင်ထဲ မျက်နှာအပ်လိုက်မိတယ်......။ သူက သဘောကျစွာ ကျွန်မကျောပြင်ကို ပွတ်သပ်လို့..။ “မင်းက ကိုယ့်အချစ်ကို မယုံရဲလို့ စိုးထိတ်နေတာမဟုတ်လား စိတ်ချဝသန် ကိုယ့်ကို သေချာကြည့် ကိုယ်ခုချိန်ကစပြီး မင်းကလွဲလို့ ဘယ်မိန်းမနဲ့မှ မပတ်သက်တော့ဘူးလို့ ကတိပေးတယ် အိုခေ.. ကိုယ့်ကို တစ်သက်လုံး ဆွဲဆောင်လာခဲ့တဲ့ မင်း ကိုယ့်နားရှိနေမှတော့ ကိုယ့်အတွက် ဘာမှမလိုတော့ဘူး ကိုယ့်ကို ယုံပါ ကိုယ်မင်းကို အသက်ထက်ချစ်ပါတယ် ၀သန် ကိုယ့်အနားမှာ တဘ၀လုံးနေပေးပါလို့ ကိုယ်အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်..”
ကျွန်မမျက်နှာ်ပေါ်မှာ လေအေးတွေတိုးဝေ့သလိုခံစားလိုက်ရလို့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ မာမီက ယပ်တဖျတ်ဖျတ် ခပ်ပေးနေတာ..။
“မိုး ညက ညဉ့်နက်မှာအိပ်ရတယ်ထင်တယ် ရှူတင်ခဏလေးနားတာကို အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ မာမီက သမီး ချွေးတွေစိုနေတာတွေ့လို့ ယပ်ခပ်ပေးနေတာ...စောစောက ကြော်ငြာပိုင်ရှင်လေး လာသေးတယ် မိုးအိပ်ပျော်နေလို့ ပြီးမှ ပြန်လာခဲ့ပါမယ်တဲ့ ပြီးတော့ မိုးစားဖို့ တစ်ခုခုသွားဝယ်မယ်ပြောတယ်”
တကယ်တော့ ကျွန်မ အိပ်မက်မက်ရင်း ဇောချွေးတွေပျံလာတာပါ..။ ကျွန်မကို မိတ်ကပ်လိမ်းပေးတဲ့ မာမီက အိုက်တယ်ထင်ပြီး ယပ်ခပ်ပေးနေရှာတာ..။ အိပ်မက်ထဲကလို ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး..။ သူနဲ့ ကျွန်မဟာ ဒီအလုပ်ကပြီးရင် ဘာမှ ပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး..။
ထစ်ချုန်းမိုးဆိုတာ ၀သန်မိုးအတွက် ဘယ်တော့မှ အေးမြမှု ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ အသေချာဆုံးပါပဲ...။
Posted by Cameron at 01:46
အိမ်မက်ကို တကယ်ထင်ပြီး Happy ending လေးဆိုပြီး ပျော်သွားတာ... အိမ်မက်ဖြစ်နေတယ် :(
11 August 2017 at 10:32